अज चैत १७ गते मंगलबार, यस्तो छ तपाईंको राशिफल ! जय माता ! पाथीभरा माताले सबैको कल्याण गरुन् !:: Mero Desh
अज चैत १७ गते मंगलबार, यस्तो छ तपाईंको राशिफल ! जय माता ! पाथीभरा माताले सबैको कल्याण गरुन् !
Published on: १७ चैत्र २०७७, मंगलवार ०२:०८
मेष (चू,चे,चो,ला,लि,लू,ले,लो,अ) प्रेम र मित्रताको बन्धन कसिनुका साथै दाम्पत्य सुखमा रमाउने समय छ । प्र’यत्न गरेको काम छोटै समयमा पूरा हुनाले समय फुर्स्दिलो रहनेछ । इच्छा शक्ति बढ्नेछ । लगनशीलताले कीर्तिमानी दिलाउन सक्छ । विभिन्न अवसर जुटेपनि अरूलाई बचन दिने बानीले दुःख पाइनेछ ।
बृष (ई,ऊ,ए,ओ,वा,वी,वू,वे,वो) अधिकारका लागि केही संघर्ष हुन सक्छ! प्र’तिस्पर्धीहरूले अप्ठ्यारोमा पार्ने प्रयास गर्नेछन् । काममा खर्च बढ्नेछ ! अर्थ अभाव खट्किए पनि चिताएको काम सम्पादन गर्न सकिनेछ । दिगो फाइदा हुने काममा लगानी गर्ने अवसर जुट्न सक्छ । भाग्यले नसोचे को फाइदा दिलाउन सक्छ ।
मिथुन (का,की,कू,घ,ङ,छ,के,को,हा) मेहनत गर्दा विभिन्न अवसर प्राप्त हुनुका साथै दैनिकीमा परिवर्तन आउन सक्छ । हिम्मतले काम बनाउन सकिनेछ । मनमा डर लागे पनि विभिन्न अवसरले पछ्याउने छन् । तार्किक क्षमता एवं बोलीको प्रभाव बढ्नेछ । आर्जित धन खर्च हुन सक्छ । आफ्नै प्रयासले लाभ मिल्न सक्छ ।
कर्कट (ही,हू,हे,हो,डा,डी,डु,डे,डो) सुखद समाचारले दिन उत्साहपूर्ण रहनेछ । स्वास्थ्य सबल रहनेछ भने काममा पनि फाइदाको योग छ । ठीक समयमा सही नि’र्णय लिन सकिनेछ । कार्य सम्पादन गर्ने क्षमता बढ्नेछ । परिवारजन का आवश्यकता पूरा हुनेछन् दिगो फाइदाका लागि लगानी बढाउन सकिनेछ ।
सिंह (मा,मी,मू,मे,मो, टा, टी, टू, टे) व्यापार व्यवसायमा सामान्य फाइदा भए पनि पशुपालन तथा कृषि क्षेत्रबाट राम्रो लाभ मिल्ने योग छ । पढाइ लेखाइमा प्रगति हुनेछ । ईर्ष्या गर्नेहरूको मनोबल कमजोर हुनेछ । आश्वासन बाँड्नेहरूले झुक्याउन सक्छन् । अरूको विश्वासमा पर्दा अन्त्यमा धोका पाइएला ।
कन्या (टो,पा,पी,पू,ष,ण,ठ,पे,पो) शत्रु र रोगबाट छुटकारा मिल्ने समय छ । स्वास्थ्यका लागि आहार विहारमा ध्यान पुर्याउनुहोला । छर छिमेकमा असमझदारी बढ्ने समय भएकाले होसियारी साथ काम लिनुहोला । टाढाको यात्रा गर्ने प्रक्रिया अघि बढ्ने समय छ । कामका लागि गरिएको भ्रमणमा समय मात्र बित्नेछ ।
तुला (रा,री,रु,रे,रो,ता,ती,तू,ते) ईर्ष्यालु मन भएकाहरूले काम बिगार्न सक्छन् बुद्धिको उपयोगले मात्र प्रतिस्पर्धीहरू लाई वशमा ल्याउन सकिनेछ बौद्धिक प्रतिस्पर्धामा विजयी भइनेछ चुनौतीहरू पन्छाउँदै रोकिएका काम पनि बनाउन सकिनेछ । वैदेशिक क्षेत्रबाट विशेष लाभ उठाउने अवसर प्राप्त हुनेछ ।
बृश्चिक (तो,ना,नी,नू,ने,नो,या,यी,यू) पहिलेको सफलताले उत्साह जगाउनेछ । बोलीको माध्यमले लाभ उठाउन सकि नेछ । प्रयत्न गर्दा अप्ठ्यारा काम सम्पादन हुन सक्छन् । उपलब्धिले थप उत्साह जगाउनेछ भौतिक साधन जुट्ना ले प्रसन्नता मिल्नेछ । साझेदारीमा पनि राम्रो फाइदा हुनेछ । यात्रामा विशेष लाभ होला ।
धनु (ये, यो, भा, भी,भू,ध,फा, ढा, भे) अतिथिका रूपमा सम्मान प्राप्त हुन सक्छ रमाइलो यात्रा गर्ने अवसर जुट्नेछ । पुरानो समस्याले केही झमेला आइलाग्ने सम्भावना छ । दाम्पत्यमा शंका र असमझदारी बढ्न सक्छ । प्रयत्न गर्दा लक्ष्यमा पुग्न सकिनेछ । परिस्थितिसँग सम्झौता गर्नु परे पनि प्रतिष्ठा जोगाउन सकिनेछ ।
मकर (भो,जा,जी,जू,जे,जो,ख,खी,खू,खे,खो,गा,गी) विश्वा समा पारेर झुक्याउनेहरूले सताउन सक्छन् । सहयोगीहरू को भर नपर्नुहोला । प्रतिष्ठा, मान सम्मान आदि पाइनेछ । स्वादिष्ट भोजनको आनन्द मिल्नेछ परिवारजनसँग आत्मी यता बढ्नेछ टाढिएका साथीभाइ नजिकिनाले हर्ष बढ्नेछ कामको तारिफ हुनाले उत्साह बढ्नेछ ।
कुम्भ (गू,गे,गो,सा,सी,सू,से,सो,दा) मेहनत एवं परिवारजन को सहयोगले लाभ उठाउन सकिनेछ घरायसी काम बन्ने छन् परिस्थिति अनुसार चल्न नसक्ता दुःख पाइनेछ सहयो गीहरूले पनि विपक्षीलाई साथ दिनाले काममा चुनौती देखिएलान् केही अप्ठ्यारा प’रिस्थितिसँग सम्झौता गर्नु पर्दा मन खिन्न रहनेछ ।
मीन (दी,दू,थ,झ,ञ,दे,दो,चा,ची)सुख दुःखमा साथदिनेहरू प्रशस्तै भेटिनेछन् भने परिवारजनको साथले नयाँ आशा पलाउनेछ! परम्परालाई समय सापेक्ष परिवर्तन गर्न सकिने छ साथ दिनेहरू बढ्नेछन् !आय आर्जनका स्रोत बढ्नेछन् व्यापारमा पनि बढी नै फाइदा हुने समय छ । आयआर्जन राम्रै हुनेछ ।